Beddelka loo adeegsado QGIS mobiladaha Android & IOS - Geofumadas
Janaayo, 2016 Featured, Geospatial - GIS, qgis
QGIS waxay u istaagtay inay tahay aaladda furitaanka ee ugu dhaqsaha badan istiraatiijiyadda istiraatiijiyadeed ee isticmaalka geospatial. Waan ku faraxsanahay inaan ogaano in noocyada QGIS ee aaladaha mobilada ay horey u jireen.
Isticmaalka jibbaarka badan ee codsiyada moobiilka ayaa ka dhigaya qalabka desktop-ka inay doortaan inay horumariyaan noocyo loo adeegsado taleefannada ama kiniinnada. Xaaladda software-ka ee Nidaamyada Macluumaadka Juqraafiyeed waa mid iska cad sababta oo ah ku lug lahaanshaha jaangooyooyinka iyo adeegsiga berrinka iyo mashiinka Geo-injineernimada leh isku-tiirsanaan sare. Illaa iyo hadda, shirkadaha dhiirrigeliya softiweerku waxay leeyihiin barnaamijyadooda moobiilka muddo dheer, oo ay ka mid yihiin AutoCAD WS, BentleyMap telefoonada gacanta, ESRI ArcPad, SuperGeo mobile, si loo siiyo tusaalayaal.
Marka laga hadlayo QGIS, ugu yaraan laba codsi ayaa lagu qeexay inay yihiin xalal, gacmaha OpenGIS.ch:
1. QGIS ee iOS.
Xitaa kuma riyoonin arrintaas. In kasta oo QGIS ay tahay mid iskudhaf ah qaabkeeda desktop, haysashada nooc QGIS ah oo loogu talagalay iPhone ama iPad hubaal suurtagal ma noqon doonto; laga yaabee inaysan waligood ilaa iyo inta Apple uusan wax ka beddelin siyaasaddiisa ganacsi.
Dhibaatadu waxay tahay nooca shatiga ee ay adeegsato QGIS waa GPL, oo ​​ugu badnaantiisa ay tahay furfurnaanta koodhka si loo ogaado loona hagaajiyo adeegsadayaasha ugu dambeeya. Shuruucda ciyaarta AppStore waxay sheegaysaa in aysan macquul ahayn in la horumariyo codsiyada aan lahayn koodh lahaansho oo dammaanad qaadaya in aan loo adeegsan doonin in lagu waxyeeleeyo danaha dhinacyada saddexaad ee gaarka loo leeyahay. Marka sida kaliya ee ay noqon laheyd in lagu horumariyo meel ka baxsan AppStore, iyadoo loo maleynayo in isticmaaleyaasha daneynaya ay Jailbreak doonaan aaladda, taas oo aan caqli lahayn, mana ahan doorbidida isticmaalayaasha iOS.
Nasiib darro, iyada oo la tixgelinayo tirada dadka isticmaala iyo shirkadaha doorbida barnaamijka Apple, laakiin sidoo kale tusaale u ah dhibaatooyinka aan mustaqbalka ku arki doonno, software khaas ah oo raadinaya in ay xiraan meelaha bannaan ee bilaashka ah.
Kani waa codsi si ficil ahaan ah ugu dayacaya qaabka desktop-ka ee QGIS nooca 2.8 Wien. Codsiga culeyskiisu waa 22 MB, waa si toos ah uga soo gasho Google Play.
Marka howsha rakibida ay bilaabato, waxay codsaneysaa in la rakibo Wasiirka II, oo u shaqeeya buundada u dhaxeysa arjiga QGIS iyo maktabadaha QT. Kadib rakibida Ministro II, socodsiiso soo dejinta maktabadaha QT5, sida Qt5Core, qtnystlm, qtsensor, qtGui, libqoffscreen, libminimalimal, qlibqeglfs, iyo kontaroolada kale ee adeegsada awooda juqraafiga, compass, kiiboodhka, xakamaynta dhijitaalka iyo howlaha kale ee Android.
Guud ahaan, codsigu wuxuu ku dhow yahay nuqulka QGIS desktop, oo leh astaamaha iyo kan albaabada, waxay kala duwan tahay in tusmada macnaha ay ku taallaa sida hawlaha mobile-ka ee astaanta midigta midigta sare iyo dabcan xakamaynta jiirka (barakaca , xulashada, dhejinta) waa mid taabasho leh.
Marka la soo koobo, ha fileynin inaad ku isticmaasho barnaamijkan taleefan. Si kastoo shaashaddu u weynaato, ma shaqeyneyso maxaa yeelay baararka duudduuban ee xulashada xogta lama xakameyn karo; sidoo kale codsigu sida muuqata ma ogola meertada. Sidaad aragtay, waxaan ku guuleystey inaan keeno mashruuc, wicitaanka xogta WFS oo aan ugu adeegsado taleefanka gacanta ee SONY Xperia T3; In kasta oo xogta la daawan karo, xakamaynta gudida dhinac gebi ahaanba waa wax aan macquul ahayn.
Ku isticmaalkiisa kiniin cabbirkiisu caadi yahay waa hubaal sida ay u egtahay arjiga desktop-ka oo kale. Waa inaad xoogaa u halganto si aad u fahamto halka ay ku keydsan tahay xogta kaarka microSD ama xusuusta gudaha ah.
Ka soo dejiso QGIS for Android
3.Qaybta loogu talagalay QGIS
Codsigan waxaa sidoo kale soo saarey shirkad isku mid ah, miisaanka ku dhowaad 36 MB.
Ugu horreyntii, waxay codsanaysaa jiritaanka mashruuca QGIS, taas oo noqonaysa mid aad u adag tan iyo markii la geliyay faylka kiniinka ayaa tilmaamaya in dariiqyada xogta maxaliga ah ay yihiin qaraabo.
QField wuxuu leeyahay istcimaalo adeegsade asalka u ah taabashada iyo aaladaha mobilada. Qalabka is-waafajinta ayaa u oggolaanaya is-weydaarsiga xogta ee joogtada ah ee u dhexeeya qalabka moobiilka iyo kaabayaasha jira. Waxay umuuqataa mid aad ufiican oo dhameystir u ah qolka QGIS, si ka duwan kii hore oo kaliya ku dayashada nooca desktop-ka.
Sidaad arki karto, adeegsiga codsigan, asal ahaan, wuu laqabsadaa, in kastoo aad isticmaaleysid taleefan shaashad yar. Waxay u egtahay in la tijaabiyo, maxaa yeelay galitaanka feyl leh dariiqooyin qaraabo ah waa waxa aanan fileynin.
Ka soo qaad QField ee QGIS
Post Previous" Hore QGIS 3.0 - Sidee, goorma iyo maxay; waxay tilmaamaysaa
Post Next Master ee Naqshadeynta Magaalada iyo Qorshaynta [UJCV]Next »
4 Jawaab celin ah "Beddelaad loogu isticmaalo QGIS mobilada gacanta ee Android & IOS"
Sab isagu wuxuu leeyahay:
Barnaamijka wax soo gelinta oo ku saleysan QGIS waxaa laga heli karaa macruufka (TestFlight xilligan):
Mariano isagu wuxuu leeyahay:
Fiidkii oo dhan, waxaan rabay in aan waydiiyo haddii qof uu ogyahay sida loo sawirayo sawir ka mid ah mawduuca mawduuca, mashruucdayda horay ayaan u abuuray bakhaar iyo kheyraad dibadeed kaas oo ah bogga rasmiga ah ee qiilku leeyahay, laakiin hal mar codsiga marka aad qaadatay sawirka, tani lama kaydin. Qofna ma yaqaan sababta? Waxaan ku cadeeyay wadooyinka iyo waddooyinka go'an iyo waxba.
Saaxiibbada oo dhan wayna kaaga mahadnaqayaan jawaab kasta
Haa, hore ayaan u gartay. Waxay dhacdaa in mashruuca aan doonayey inaan isticmaalo jidad go'an.
Burburtay isagu wuxuu leeyahay:
Meelaha mashaariicda QGIS ay u taagan yihiin waa kuwo qaraabo ah. Waxba kama jiraan. Si fudud u koobi faylka kiniinka ama telefoonkaaga.